လ က္ခ ဏာ အ စ, ၀ါ သ နာ က…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » လ က္ခ ဏာ အ စ, ၀ါ သ နာ က….
လ က္ခ ဏာ အ စ, ၀ါ သ နာ က….
Posted by aye.kk on May 27, 2012 in My Dear Diary | 24 comments
ကျ မ တို့ခေတ် တုံး က တော့ သူ ငယ် တန်း ကို (က) နှင့် (ခ) ခွဲ ထား သ ဖြင့် (၂) နှစ် တက် ခဲ့ ရ ပါ သည် ။ ပ ထ မ တန်း တက် သည့် အ ချိန် စာ များ ကို စာ လုံး ပေါင်း သတ် ပုံ မှန် စွာ ဖြင့် ကျေ ကျေ ညက် ညက် ဖတ် တတ် နေ ခဲ့ ပြီ ဖြစ် ပါ သည် ။
ထို စဉ် အ ခါ က စား ပွဲ ဘီ ဒို ပေါ် တွင် တွေ့ မြင် နေ ရ သော လ က္ခ ဏာ စာ အုပ် များ ကို ယူ ငင် ခါ ၊ ကောက် ယူ ဖတ် နေ မိ တတ် သော် လည်း ၊ သ ဘော တ ရား နား မ လည် သ ဖြင့် အစ် မ ဖြစ် သူ မ ကြီး ကျယ် ကို လည်း မ မေး ရဲ ၊ ကိုယ့် ဟာ နှင့် ကိုယ် လည်း နား လည် အောင် မ ဖတ် တတ် သ ဖြင့် စိတ် ဒု က္ခ အ ကြီး ကျယ် ရောက် နေ မိ ပါ သည်။
ကံ ကောင်း ချင် တော့ တ ရက် တွင် ၊ ဘေး အိမ် ကို ရန် ကုန် မှ လ က္ခ ဏာ ဆ ရာ ကျော် သူ ၊ ဆို သူ လာ လည် ပါ တော့ သည်။ ကိုင် ရို ၀ါ သ နာ အိုး ဖြစ် သူ အစ် မ မကြီး ကျယ် က ည နေ ခင်း ပိုင်း တွ င် ဆ ရာ ကျော် သူ နှင့် လ က္ခ ဏာ ပ ညာ ရပ် များ အား ဆွေး နွေး ပါ တော့ သည် ။ ကျ မ က လည်း အစ် မ ဖြစ် သူ မ ကြီး ကျယ် နောက် သို့ လိုက် လာ ခဲ့ မိ ရင်း ၊ အ နား က နေ ၊ တ ဖ ၀ါး မှ မ ခွါ ပါ ဘဲ သိ ချင် စိတ် နှင့် ပေ ကပ် ၍ ၊ သာ တွယ် ကပ် နေ မိ ခဲ့ ပါ သည်။
လ က္ခ ဏာ ပ ညာ ရပ် အား လွန် စွာ လေ့ လာ လိုက် စား လျှက် ၊ နာ မည် ရ နေ ပါ သော ဆ ရာ ကျော် သူ ဆို သူ နှင့် အစ် မ ၊ မ ကြီး ကျယ် တို့ဆွေး နွေး အ ပြီး ခ ဏ နား သည့် အ ချိန် ၌ ၊ ဆ ရာ ကျော် သူ အား သ ဘော ကောင်း သူ ဟု ထင် မြင် မိ သ ဖြင့် ၊ လ က် ဖ ၀ါး ပြင် အား လက် ညိုး လေး ဖြင့် ထိုး ခါ ၊ မိ မိ နား မ လည် နေ သော ဂြိုလ် ခုံ များ အား မေး မိ ခဲ့ ပါ တော့ သည်။
ဆ ရာ ကျော် သူ မှ သေ ချာ ပြော ပြ ၍ ၊ နား လည် သ ဘော ပေါက် အောင် ရှင်း ပြ ပါ သည်။ အ မ အား လည်း ကျ မ ၏ မွေး သ က္က ရာဇ် အား မေး မြန်း လျှင် အ မ က ၊ ကျ မ ၏ မွေး သက္က ရာဇ် ပြော ပြ ပီး သည့် အ ခါ ဆ ရာ ကျော် သူ က ကျ မ ၏ ဇာ တာ ခွင် အား အ ကြမ်း ချ တွက် ကြည့် ပြီး ၊ ခ လေး က က ရ ကဋ် စန်း ရ သ ဖြင့် ၊ လ က္ခ ဏာ ဗေ ဒင် ပ ညာ ၀ါ သ နာ ပါ မည့် သူ ဖြစ် သည် ဟု အစ် မ အား ပြော ပြ ပါ သည်။
ခ လေး ကို အိမ် ပြန် ရောက် လျှင် မ ဆူ ပါ နှင့် ဟု လည်း မှာ လိုက် ပါ သည်။ အစ် မ က ကျ မ ကို ဘယ် နေ ရာ မ ဆို သိ ချင် တတ် ချင် စပ် စု ချင် သည့် မ စပ် စု မ ဟု အ မည် ပေး ခဲ့ ပါ သည်။ နောင် တ ဖြေး ဖြေး ကြီး ပြင်း လာ သည့် အ ရွယ် တွင် မ တော့ ၊ ကျ မ ၏ စိတ် ကို ကြည့် မြင် ဆုံး ဖြတ် ပြီး ကွန် မြူ နစ် မ ဟု ပြောင်း လဲ ခေါ် ဝေါ် ခဲ့ ပြန် ပါ သည် ။
လက် ဖ ၀ါး ပြင် ဂြိုလ် ခုံ များ အား ၊ အောက် ဖော် ပြ ပါ အ တိုင်း မှတ် သား လျှက် သိ ရှိ ခဲ့ ရ သ ဖြင့်ပျော် ရွှင် စွာ အား ရ ကျေ နပ် မိ ခဲ့ ရ ပါ သည်။
၁ ။ လက် သန်း အောက် ခြေ ရင်း ( ဗု ဒ္ဓ ဟူး ဂြိုလ် ခုံ)
၂ ။ လက် သူ ကြွယ် အောက် ခြေ ရင်း ( တ နင်း င်္ဂ နွေ ဂြိုလ် ခုံ)
၃ ။ လက် ခ လယ် အောက် ခြေ ရင်း ( စ နေ ဂြိုလ် ခုံ )
၄ ။ လက် ညိုး အောက် ခြေ ရင်း ( ကြာ သာ ပ တေး ဂြိုလ် ခုံ)
၅ ။ လက် ညိုး နှင့် လက် မ အ ကြား ( အ င်္ဂါ အ ဖို ဂြိုလ် ခုံ )
၆ ။ လက် မ အောက် ခြေ ရင်း ( သော ကြာ ဂြိုလ် ခုံ )
၇ ။ လက် ဖ ၀ါး ပြင် အ လယ် ( အ င်္ဂါ အ မ လွင် ပြင် )
၈ ။ လက် သန်း တည့် တည့် အောက် လက် ဖ နောင့် အ ပေါ် ဘက် ( တ နင်း လာ ဂြိုလ် ခုံ)
၉ ။ ဗု ဒ္ဓ ဟူး ဂြိုလ် ခုံ နှင့် တ နင်း လာ ဂြိုလ် ခုံ စပ် ကြား အ စွန်း ထိ အား ( အ င်္ဂါ အ မ လွင် ပြင် )
ဟု မှတ် ယူ ရ မည့် အ ကြောင်း နှင့် လက် ချောင်း များ ကို လည်း ဂြိုလ် ခုံ အ မည် နာ မ များ အ တိုင်း ပင် ခေါ် ဆို သည် ဟု ပြော ပြ ခဲ့ ပါ တော့ သည်။
ဂြိုလ် ခုံ များ အား အ လွတ် ကျက် မှတ် သား ခါ ၊ လ က္ခ ဏာ စာ အုပ် အား ပြန် ဖတ် ရှူ လျှင် ၊ လွယ် ကူ စွာ ပင် နား လည် သ ဘော ပေါက် လာ ခဲ့ သ ဖြင့် ၊ ကျ မ မှ ထို ဆ ရာ ကျော် သူ အား ၊ ယ နေ့ အ ချိန် ထိ ပင် ကျေး ဇူး တင် နေ မိ ပါ သည်။
လ က္ခ ဏာ အ စ , ၀ါ သ နာ က ဟု သာ ဆို လိုက် ချင် ပါ တော့ သ တည်း ။။
လက္ခဏာတော့ ၀ါသနာမပါဘူး အန်တီရ..
ဂြိုလ်ခုံအကြောင်းလေးတွေတော့ Bookmark လုပ်သွားပါရဲ့
ဂြိုလ်ခုံတွေအကြောင်း ကျနော်လည်း မှတ်သွားပါတယ်
ကျနော်လည်း လက္ခဏာကို ကြည့်တတ်ဘူးဗျ ..
နှလုံးလမ်းကြောင်း ကျွန်းခံတယ်ဆိုတာတောင် ဘယ်လိုကြည့်ရမှန်းကို မသိတာ ..
တော်ရုံ ဦးဏှောက်နဲ့ ဗေဒင် လက္ခဏာတွေ မှတ်နိုင်ဖို့ မလွယ်ဘူးတင်တယ်နော်။
ကိုယ်တိုင်လည်း ဖတ်တော့ ဖတ်ဖူးပါရဲ့ ဘာမှမမှတ်မိလို့။
ဗေဒင် လက္ခဏာ နဲ့ ပတ်သက်ရင် တစ်လုံးမှ မသိပေမယ့် ၊ တစ်ကယ်တော် တစ်ကယ်စွမ်းတဲ့ ဗေဒင်လက္ခဏာ ဆရာ ဆိုတာ အသက်၅၀ ကျော်အရွယ်တွေဘဲ များတယ်လို့ တော့ ၊ လက်တွေ့ တွေ့ ခဲ့ဖူးပါတယ် ခင်ဗျာ့ ။ အဲ့ချိန်လောက်မှ လေ့လာခဲ့တဲ့ ပညာတွေရယ် ၊ အတွေ့ အကြုံတွေ ရယ် ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ အကောင်းဆုံး ဟောချက်တွေ အကောင်းဆုံးသော ယတြာတွေကို ပေးနိုင်တယ်လို့ ထင်မိပါတယ် ။
thank you. ပါနော်။
အင်္ဂါအမလွင်ပြင်(၇) နဲ့ အင်္ဂါလွင်ပြင်အမ(၉)က
အဘ အထင် တော့ ( အထင် )
၇ ။ လက် ဖ ၀ါး ပြင် အ လယ် = အ င်္ဂါ လွင် ပြင်
၉ ။ ဗု ဒ္ဓ ဟူး ဂြိုလ် ခုံ နှင့် တ နင်း လာ ဂြိုလ် ခုံ စပ် ကြား အ စွန်း ထိ အား = အ င်္ဂါ အ မ ဂြိုလ် ခုံ
အဲလို ထင်မိတာပဲ ။ သင်္ဘောပေါ် လက္ခဏာ စာအုပ်တွေ ယူမလာမိတော့ ၊
ဆိုးကျိုးအမှတ်အသားတခုလို့ ပြောလို့ ရပါတယ်..
အန်တီအေးရေ… လက်ဖ၀ါးပြင်ပေါ်က ဂြိုလ်ခုံတွေကို သိရလို့ …. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် … ။
ထထိုင်တည်း အလွတ်လည်းကျက်ပြီး မှတ်သားထားလိုက်ပါတယ် … ။
လက်ဖ၀ါးပေါ်က ဘယ်လမ်းကြောင်းက ဘာလို့ ခေါ်တယ်ဆိုတာလေးပါ … အလျဥ်းသင့်လျှင် ရေးပေးပါဦးနော် … ဥပမာ နှလုံးလမ်းကြောင်းတို့ ကံလမ်းကြောင်းတို့စသဖြင့်ပေ့ါလေ … ။
ပြောပြလို့ သိသွားရင် သူများတွေကို ပြန်ပြီးဟောမည်၊ပြောမည်။
silver hero သူများတွေကို ပြန်ပြောဖို့တော့ မရဲပါဘူး (ကိုယ်တိုင်က ဘာမှသေချာမသိတာ) ။
တစ်ခါတစ်လေ … အန်တီအေးက ဘာဂြိုလ်ခုံလို့ ပြောလျှင် အလွယ်သိအောင် မှတ်ထားရုံလေးပါ ..ဟိဟိ … ။
ပြောင်းလဲလို့ မရတဲ့အမှန်တရားလို့ ဆိုကြတယ်
အန်တီအေး… တခုမေးပါရစေ..။ လက်ဖဝါးပြင် အမှတ်အသား အပြောင်းအလဲကိုလိုက်လို့ လက္ခဏာအဟော တချိန်နဲ့တချိန် မတူနိုင်ဘူး flexible ရှိတယ်။ ဗေဒင် နက္ခတ်ကြတော့ ဘယ်လိုလုပ်မလည်း သူက ပုံသေကားချပ် ဖြစ်မနေဘူးလား။
မွေးရာပါ,မိခင်ဖခင်တို့ ရဲ့ မျိုးရိုးဗီဇ,
မိမိရဲ့ လက်ဖ၀ါးပြင်မှာခတ်မငါးဖြာပါရှိမှသာအကောင်းဆုံးလို့ ဆိုပါတယ်..
ကောင်မလေးတယောက်နှစ်ယောက်လောက်ကိုမယူနိုင်ဘဲနဲ့ ပြစ်မှားမိတယ်ဆိုပါစို့ ..
တိတ်တိတ်ပုန်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တောင်၊အသွေးအသားနဲ့ ဖွဲ့ စည်းထားတဲ့လက်ဖ၀ါးပြင်မှာ
အန်တီအနေနဲ့ ကသာမာန်ဥာဏ်ရည်နဲ့ ဝါသနာပါလိုက်စားတဲ့အဆင့်မှာပဲရှိနေတာပါ..
အဘဖောရော ကျနော့်လက်ကို ကြည့်ပေးမယ်ဆိုရင် ပို့ပေးလိုက်မယ် ။
လက်ဖဝါးရဲ့အလယ်ကောင်ကို အ င်္ဂါ လွင်ပြင်လို့ခေါ်ကြောင်းမှတ်သားဘူးပါတယ်။
အစ်မရဲ့ စာကိုယူပြီးကျနော်ကျက်မှတ်ထားဘူးတဲ့ လင်္ကာလေးနဲ့ရေးကြည့်မိပါတယ်။
သူ့ညာဘက်တွင်အလွယ်စစ်ကြည့် (ညာ=အ င်္ဂါ ဖို စစ်=အ င်္ဂါ မ သတိရ)
၁ ။ လက် သန်း အောက် ခြေ ရင်း ( ဗု ဒ္ဓ ဟူး ဂြိုလ် ခုံ) လွယ်
၂ ။ လက် သူ ကြွယ် အောက် ခြေ ရင်း ( တ န င်္ဂ နွေ ဂြိုလ် ခုံ) အ
၃ ။ လက် ခ လယ် အောက် ခြေ ရင်း ( စ နေ ဂြိုလ် ခုံ ) တွင်
၄ ။ လက် ညိုး အောက် ခြေ ရင်း ( ကြာ သာ ပ တေး ဂြိုလ် ခုံ) ဘက်
၅ ။ လက် ညိုး နှင့် လက် မ အ ကြား ( အ င်္ဂါ အ ဖို ဂြိုလ် ခုံ ) ညာ
၆ ။ လက် မ အောက် ခြေ ရင်း ( သော ကြာ ဂြိုလ် ခုံ ) သူ့
၇ ။ လက် ဖ ၀ါး ပြင် အ လယ် ( အ င်္ဂါ အ မ လွင် ပြင် ) စစ်
၈ ။ လက် သန်း တည့် တည့် အောက် လက် ဖ နောင့် အ ပေါ် ဘက် ( တ နင်း လာ ဂြိုလ် ခုံ) ကြည့်
၉ ။ ဗု ဒ္ဓ ဟူး ဂြိုလ် ခုံ နှင့် တ နင်း လာ ဂြိုလ် ခုံ စပ် ကြား အ စွန်း ထိ အား ( အ င်္ဂါ အ မ လွင် ပြင်)
(၉။)က စစ် ပါဘဲမလို့ မရေးတော့ပါဘူး။
လက်သူကြွယ်အောက်က တ န င်္ဂ နွေ ဂြိုလ် ခုံ လေးဖောင်းကြွလာမဲ့ရက်ကိုမျှော်လင့်စောင့်စားလျှက်ပါ။
ကျနော် တင်္နလာဂြိုလ်ခုံမှာ (လက်သန်းအောက်နဲ့ လက်ဖနောင့်ကြား) မှာ
ဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်… ပြီးတော့ အဲ့ထဲက အရေးကြောင်းတစ်ခုက
ပညာရေးလမ်းကြောင်းနဲ့ ဆက်ပြီး အရှည်လိုက်ကြီးဖြစ်သွားပါတယ်။
(အဲ့အရေးကြောင်းက ဒီတစ်လနှစ်လအတွင်းမှ တင်္နလာဂြိုလ်ခုံက
အရေးကြောင်းနဲ့ သွားဆက်တာထင်ပါတယ်။) အဲ့ဒါ ဘာဖြစ်သလဲဆိုတာ
ကျနော်က လက္ခဏာပညာ အားနည်းတော့ ဆရာမကြီးအနေနဲ့
ဆရာမကြီးရေ.. ဆရာမ မေလ်းလိပ်စာကျနော့်မှာ
မရှိဘူးဗျ… ဘယ်သူ့မေးရမှန်းလည်း မသိဘူး..
ဖြစ်နိုင်ရင် ကျနော်ကို PM ကနေတစ်ဆင့်
သိပ်နားမလည်တာရှိရင် ဆရာမပဲ ညွှန်ပြပေးပါ့နော့..
အန်တီအေး.. ကြောင်ကြီး တရုတ်မနဲ့ ရမရ ကြည့်ပေးဗာ…။ ဂယ်မေးဒါနော်…။